Booliska Kenya oo la sheegay in ay iska indha tirayaan warbixino kaga imanaya shacabka… – Hagaag.com
Booliska Kenya oo la sheegay in ay iska indha tirayaan warbixino kaga imanaya shacabka…
Posted on 30 Luulyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Booliska Kenya ee ku sugan ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta ayaa la sheegay in ay iska indha tirayaan warbixino kaga imaanaya dadka shacabka oo ku aadan in dagaal yahano taabacsan ururka Al shabab lagu arkay degaano hoos yimaada Lamu.
Dadka rayidka ayaa sheegay in dagal yahanada oo ku hubeysnaa hub culus ay ku arkeen galabnimadii sabtida agagaarka xarunta xooga korontada Ndeu oo dhowr kiilo mitir u jirta degaanka Milihoi oo dagaal yahanada Al shabab khamiistii la soo dhaafay ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada booliska hal mid kalena ay ku dhaawaceen.
Weerarkii khamiista ayaa sidoo kale dagaal yahanadu waxay ku gubeen gaari nooca Land Cruiser-ka oo boolisku wateen iyo mid kale oo nooca raaxada oo gaar loo lahaa, iyadoo kooxdii falkan ka danbeysay ay dib ugu laabteen keynta Boni.
Benson Mwangi oo ka mid ah dadka ku nool waaxda hindi ayaa wargeyska Nation u sheegay in dagaal yahanada ay arkeen ay u sheegeen booliska ayna rajenayaan in laamaha amniga ay talaabo qaad muujiyaan.
Balse taliyaha ciidamada booliska ismaamulka Lamu Charles Mbatu ayaa sheegay in dadweynaha ay arkeen ciidamo ka tirsan laamaha amniga Kenya oo howlo roondo ah ka wada degaanka Milihoi oo khamiistii weerar ay ka geysteen Al shabab.